तपाईलाई अनियमित महिनावारी हुन्छ? यस्तो छ अचुक औषधि स्पेसखबर
अझै ८६ प्रतिशत महिला ‘स्यानेटरी प्याड’को पहुँचबाहिर सरकारले देशभरमा सहज तरिकाले स्यानेटरी प्याड उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आए पनि ८६ प्रतिशत महिला स्यानेटरी प्याडको पहुँचबाहिरै छन्।
'रेटिनोब्लास्टोमा' क्यान्सरको असर कलिला केटाकेटीमा बालबालिकाको आँखा रातो भइरहन्छ र औषधि गर्दा पनि निको हुँदैन भने त्यसलाई सामान्य रुपमा लिन नहुने चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।
यी हुन् ध्यान गर्दाका ७ फाइदा मानिस ध्यान किन गर्छन्, यसमा धेरैको जिज्ञासा होला। वास्तवमा ध्यान विचारसिद्धिको अवस्था हो । ध्यान कुनै वस्तुप्रतिको एकाग्रता भने होइन। यो आफैँमा विश्राम पाउने एउटा प्रक्रिया हो। हामीले ध्यान गर्दाका ...
मधुमेह र उच्च रक्तचापबाट बच्न के खाने ? मधुमेहले धेरैलाई सताएको छ । यसलाई हामी वंशाणुगत रोग पनि भन्छौं । खासगरी विलासी जीवनशैली रोज्नेहरु नै मधुमेहको संक्रमणमा पर्छन् ।
बिहानको यौन सम्पर्क सबैभन्दा उत्तम तपाईंले यौन सम्पर्क राख्ने समय कुन हो ? साता वा महिनामा कतिपटक यौन सम्पर्क राख्नुहुन्छ ? कुन समयमा यौन सम्पर्क राख्दा उचित हुन्छ ? बेला न कुबेलाको यौन सम्पर्कले ...
अज्ञात रोगले हुम्लामा ८ को मृत्यु अज्ञात रोगका कारण हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकामा ८ जनाको मृत्यु भएको छ । रोगकै कारण दर्जन बढी बिरामी परेका छन् । एक सातासम्म फैलिएको अज्ञात रोगले शुक्रबारसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ...
यसकारण कराउँछ हाम्रो पेट के तपाईं कहिले धेरै बेरसम्म केही पनि नखाई बस्नुभएको छ ? बस्नु भएको छ भने अवश्य पनि तपाईंको पेट त्यतिबेला कराएको पनि होला । किनभने हामी धेरै बेर ...
धन्यवाद ‘डाक्टर’ : जहाँ ५ रुपैयाँमै उपचार हुन्छ बिरामी पर्दा हाम्रो आँखा ठोकिन आइपुग्छ, अस्पलाको लामो लाइन र औषधिको महँगो बिल । तर, वाङ्चुक राप्तेन लामाले विगत तीन वर्षदेखि ५ रुपैयाँमै बिरामको उपचार गरिरहेका छन् ।
पहाड चढ्यो लामखुट्टे तराईमा लामखुट्टेबाट औलो संक्रमण हुनु सामान्य हो । अब औलो तराईमा सीमित छैन । उच्च पहाडी क्षेत्रसम्म फैलिन थालेको छ । एनोफिलिज प्रजातिको लामखुट्टे पहाडतर्फ चढेपछि औलो पनि सँगसँगै ...
विश्व औलो दिवस गत वर्ष ५ सय ४१ औलो प्रभावित विश्व औलो (मलेरिया) दिवस आज नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । औलो रोगबारे जनचेतना फैलाउने उद्देश्यका साथ प्रत्येक वर्ष अप्रिल २५ मा विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी यो ...
आज पनि खुवाइँदै भिटामिन ए र जुकाको औषधि आज (शनिबार) पनि मुलुकभर ५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइँदै छ । दोस्रो चरणको राष्ट्रिय ‘भिटामिन ए’अभियान अन्तर्गत ७७ जिल्लामा ६ महिनादेखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई ...
भिटामिन ए र जुकाको औषधि : आज र भोलि खुवाइँदै शुक्रबार र शनिबार मुलुकभर ५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइँदै छ । दोस्रो चरणको राष्ट्रिय ‘भिटामिन ए’अभियान अन्तर्गत ७७ जिल्लामा ६ महिनादेखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई ...
स्वास्थ्यमा भएको खर्च अपारदर्शी, २२ अर्बको हिसाब किताब नै छैन स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित ५६ अर्बमध्ये २२ अर्बभन्दा बढी रकमको हिसाब किताब नै नभएको पाइएको छ । संघबाट स्थानीय तहका लागि पठाइएको १८ अर्ब र प्रदेशका लागि पठाइएको ४ अर्ब ...